Yakazara Hondo: WARHAMMER II, ichauya mwedzi uno uye izvi ndizvo zvinodiwa | Linux Vakapindwa muropa
Pakati paJune, Feral Inopindirana yakatsamwisa Linux neMac vatambi nekuburitswa kweHondo Yese HondoHAMMER II. kune aya mapuratifomu, akateedzana emukurumbira mutambo wevhidhiyo Yakazara Hondo: WARHAMMER yakaburitswa anopfuura makore maviri apfuura.
Mushure meHondo Yese Saga: Zvigaro zveBritannia zvichakurumidza kuwanikwa paGNU / Linux zvakare "Hondo Yakazara: WARHAMMER II".
Yakazara Hondo: WARHAMMER II ndiyo yakateerana kuHondo Yese: WARHAMMER, mumwe mutambo wakaburitswa paLinux naFeral muna2016.
Mutambo wakagadzirwa neCreative Assembly uye wakaburitswa naSega paWindows.
Feral Inopindirana iri kugadzirira kuburitsa Yakazara Hondo: WARHAMMER II yeLinux uye macOS pakupera kwemwedzi uno uye munguva pfupi yapfuura yakazivisa izvo zvinodiwa zvemutambo uyu.
Feral Interactive yakati mune chirevo chakakosha kuti iyo vhezheni yeLinux neMacOS ichave ichisvika munaNovember.
Zvakanaka, isu tiri pakati pemwedzi uye ikozvino Feral Inopindirana yaburitsa zviri pamutemo system zvinodiwa kutamba vhidhiyo mutambo Wakazara Hondo: WARHAMMER II pamakomputa neLinux neMacOS, achiti chiteshi chichave chiripo pamapuratifomu maviri aya mwedzi.
1 Nezve Yakazara Hondo: WARHAMMER II
2 Yakazara Hondo: WARHAMMER II mutambo system inodikanwa yeLinux neMac
Nezve Yakazara Hondo: WARHAMMER II
Yakazara Hondo: Warhammer II ndiko kuenderera kwemutambo unorumbidzwa zvakanyanya Hondo Yese: WARHAMMER, iyo yakagashirawo vhezheni yeMacOS neLinux nekuda kweFeral Interactive.
Hondo Yese: Warhammer II inoratidza kutendeuka-based zano uye chaiyo-nguva mateki mutambo yakafanana nemimwe mitambo muTotal Hondo dzakateedzana.
Mumushandirapamwe, vatambi vanofambisa mauto kutenderedza mepu uye nekugadzirisa misha vachichinjana.
Vatambi vanoita dhipatimendi uye vanorwa neAI-inodzorwa mapato. Kana mauto asangana, chaiyo-nguva kurwa kunotevera.
Mutambo uyu zvakare une yakasarudzika yehondo modhi uko vatambi vanogona kugadzira zvetsika hondo munguva chaiyo, pamwe nepamhepo multiplayer hondo.
Vaya vane nhangemutange kubva mumutambo wekutanga vanove nemadzinza akafanana akavhurirwa vatambi vakawanda mumutambo wechipiri.
Mushandirapamwe mukuru wemutambo unonzi Ziso reVortex. Iyo inorondedzera-centric mushandirapamwe apo yega yega yemitambo inotamba ine yayo nyaya nezviratidzo.
Yakazara Hondo: WARHAMMER II mutambo system inodikanwa yeLinux neMac
Zvinoenderana naFeral Interactive, Kuti utambe Yakazara Hondo: WARHAMMER II paLinux, GeForce GTX 970 kana zvirinani kana Radeon RX 480 kana zvirinani zvinodikanwa.
Pamberi pomutyairi kumberi, ivo vanonyora ingangoita iyo NVIDIA 396 driver akateedzana kana yeRADV rutsigiro neMesa 18.1.5 kana nyowani.
Zvakanaka kuona kuti hazvidi izvo zvazvino NVIDIA / Mesa madhiraivha panguva ino kutenderedza kwavo Vulkan-powered Linux mitambo yemitambo.
Kuti umhanye iri zita paLinux, Feral Inopindirana inokurudzira Linux gamers kushandisa komputa ine ingangoita Ubuntu 18.04 64-bit, Intel Core i3-4130 3.4 GHz processor, 6GB ye RAM, iyo Nvidia GTX 680 2GB kana AMD R9 285 2GB kadhi yemifananidzo (XNUMXrd chizvarwa GCN) kana yepamusoro.
Nepo izvo zvinokurudzirwa zvinodiwa zviri 7GHz Intel Core i4770-3.4 processor, 8GB ye RAM uye iyo Nvidia GTX 970 4GB kana AMD RX 480 4GB kana yakakwira mifananidzo kadhi.
Vashandisi veMac vanosanganisira ese 13-inch MacBook Pro mamodheru akaburitswa kubvira 2016, ese gumi-masendimita MacBook Pro mamodhi akaburitswa mukupera kwa15 aine 2013 GHz kana yepamusoro processor
Ese 21.5-inch iMac mamodheru kubva kupera kwa2017, pamwe neese 27-inch iMac mamodhi akaburitswa kubva kunopera 2013 aine 2GB kana zvirinani kadhi yemifananidzo.
Mutambo uyu uchazotambika pamakumi maviri neshanu iMac mamodheru akaburitswa kubva kunopera 27 anouya ne2012GB Nvidia GeForce GTX 680MX kadhi yemifananidzo, pamwe neayo ese 2-inch iMac Pro mamodheru akaburitswa kubva kunopera 27 uye ese Mac Pro mamodheru akaburitswa kubvira kupera kwa2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Yakazara Hondo: WARHAMMER II, ichauya mwedzi uno uye izvi ndizvo zvinodiwa
Iyo nyowani vhezheni yeDepin OS 15.8 inosvika pamwe nekuvandudzwa kutsva